Kooxah France, Belgium iyo England oo leh waxyaabo ay wadaagaan dhinaca laacibiinta… – Hagaag.com
Kooxah France, Belgium iyo England oo leh waxyaabo ay wadaagaan dhinaca laacibiinta…
Waxaa jira waxyaabo ay wadaagaan afarta kooxood ee isugu soo haray semi-finalka koobka adduunka seddax ka mid ah ka sokow isu dhowaanshaha dhinaca jugraafiga, waxay leeyihiin waxyaabo kale oo ka siman yihiin.
Kooxaha Faransiiska, Belgium iyo England waxay leeyihiin tiro badan oo ciyaartoy ah oo u dhashay waalidiin soo galooti ah ama dhinaca hooyada ama aabaha.
Tirokoobyada ayaa muujinaya, in 16 ciyaaryahan oo ka mid ah 23 ciyaaryahan oo wakiilka ka ah France ee koobka adduunka uu ugu yaraan mid ka mid waalidkooda uu ku dhashay meel ka baxsan France. Laba ka mid ah ayaa ku dhashay jasiiradaha Faransiiska ee badda Caribbean, oo ah qayb ka mid ah Faransiiska.
Tirakoobka ayaa sidoo kale muujinaya in 11 ciyaartoy oo Belgium ah iyo lix ciyaartoy oo England ah ay ahaayeen ugu yaraan hal ka mid ah waalidkood muhaajiriin. Waxaa kaloo ku jira afar ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Ingiriiska oo ka soo jeeda Caribbean, waxaa kamid ah Rahim Sterling, oo ku dhashay Jamaica.
Kala duwanaanshaha dhaqanka sababtiisa ayaa France waxay heshaa taageerayaal badan oo ka soo jeeda dalal badan oo ku taageera tartanka horyaalka koobka adduunka.
Isla sidaas oo kale kooxda Belgium, oo 11 ciyaaryahan oo mid ka mid ah waalidiintiisa ay yihiin soo galooti ugu yaraan, oo ay ku jiraan Romelu Lukaku iyo Vincent Kompany oo waalidiintooda ka soo jeeda Congo – Aabaha Lukaku ayaa u ciyaari jiray kooxdii Zaire bartamihii sagaashameeyadii ee qarnigii la soo dhaafay.
Tani waxay ku tusineysaa sawir aad u kala duwan ee kooxdii ciyaaraha Koobka Adduunka ee Belgium 2002dii, oo ku jiray labo ciyaaryahan oo keliya oo aan asalkooda Belgium aheyn.